Ka 2019 | Save A Train
ọnwa: Ka 2019
Home > Ka 2019
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji E nwere ọtụtụ ihe mere ndị mmadụ na-amasị njem. Otu nke ndị i nwere ike ịnụ Ọtụtụ bụ ikike nwere ọhụrụ na-akpali akpali ahụmahụ. Gịnị na-eme njem mara mma bụ na àgwà dị iche iche ga-ụtọ site dị iche iche ihe. Adrenaline junkies…
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Okporo mmiri ụgbọelu maka ụgbọ okporo ígwè na-aga Europe maka a Weekend eche. Save A Train na-eme ka ọ dị mfe ka akwụkwọ n'ime nkeji na-enweghị kwukwara ụgwọ, otú i nwere ike na-enwe gị ego na-eme! Ndị a bụ nhọrọ anyị maka ebe kachasị mma na Europe…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji France bụ a na-ewu ewu njem nleta hotspot ekele ya mara mma obodo na ama akara. Na mba ahụ bụ a dream ebe ama ama gburugburu ụwa maka ya ịrịba omenala na-atọ ụtọ nri. Ezie na ọtụtụ ndị njem nleta na-enuga Paris, obodo pụrụ mgbe mgbe na-nnọọ mmadụ karịrị akarị, ọ kachasị…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Underground Art na ụzọ ụgbọ oloko ụgbọ yiri ka ọhụrụ ngosi nka nke ndị mmadụ. Ha na-aghọ ndị ọhụrụ ga-ahụ na ebe maka na nkà na imewe enthusiasts. Ònye gaara eche? Ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị egwu ọha oghere, agwakọta nnukwu-ọnụ ọgụgụ art na imewe nwere ike ịchọta…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Gọọmenti rụrụ nwere a ọjọọ RAP n'ihi ịbụ unyi, inyoghi inyoghi, na stinky. Ma ị maara na gọọmenti rụrụ ugbu a kwalite? N'ihi na ndị na-amaghị ihe na gọọmenti rụrụ na-, ọ bụghị naanị na anyị sụgharịrị họtel ahụ ma soro ya gbaa ọsọ. Gọọmenti rụrụ dị ọnụ ala ụlọ…
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Mgbe na search nke kasị mma Devid agụghị ndị gbara na-echekwa na Europe, ị bụghị naanị na-ele anya maka ndị adịghị agafe agafe iberibe. Ị na-na-na-ewere a njem ala ebe nchekwa uzo na ịgagharị akụkọ ihe mere eme. A Devid agụghị ndị gbara ụlọ ahịa bụ akin ka a ejiji ngosi nka, na-egosi omenala obodo…